Ngubani oyena Mntu unamandla kuShishino lweeMveliso zokuKhuthaza?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ngubani oyena Mntu unamandla kuShishino lweeMveliso zokuKhuthaza?
I-Advertising Specialty Institute® (ASI), eyona nto inkulu yemfundo, imithombo yeendaba kunye nentlangano yokuthengisa ekhonza i-20.7 yeebhiliyoni zeemveliso zokuthengisa ishishini, namhlanje ibhengeze uluhlu lwaminyaka le-Power 50 lwabaphathi abanamandla kakhulu kwishishini. U-Phil Koosed, umseki we-BAMKO kunye negosa eliyintloko leqhinga lenkampani engumzali, iQela leeNkampani eziPhezulu, kwathiwa nguNombolo we-1 phakathi kwabantu abanamandla kakhulu kwishishini.
Ezinye ezintlanu eziphezulu zibonisa iinkokeli zeshishini ezinempembelelo ekude. Bona, ngokulandelelana: uJonathan Isaacson, i-CEO / usihlalo weGemline; Jo-an Lantz, iCEO/umongameli waseGeiger; UJeremy Lott, umongameli / i-CEO yeSanMar; kunye noMarc Simon, i-CEO ye-HALO Branded Solutions.
Uluhlu lwalo nyaka olukhethekileyo lubonisa iinkokeli zeenkampani ezininzi ezithe zaphumelela ishishini labo ngexesha lobhubhani we-coronavirus. Ubunkokeli buka-Koosed babubalulekile kwi-BAMKO yokuphonononga kwi-PPE, eye yanegalelo elikhulu kwinkampani yokunyusa ingeniso yentengiso yonyaka yaseMntla Melika ngama-78.5% ukuya kwi-194 yezigidi zeedola ngo-2020 - okona kunyuka kakhulu konyaka kuzo zonke iinkampani eziphezulu ezingama-40 zabasasazi.
"Ndiyavuyisana nazo zonke iinkokeli, ababonisi kunye neentshatsheli zenkampani ezibandakanyiweyo kwi-Power 50 ehloniphekileyo. Zizona zibalaseleyo," watsho uTimothy M. Andrews, umongameli we-ASI kunye ne-CEO.
Ushishino lweemveliso zentengiso luqulathe abathengisi abenza, abakhupha kunye/okanye baprinte iimveliso kunye nabasasazi abathengisa kwaye bathengise ezo mveliso kubathengi. Awona magama makhulu ehlabathini, kunye nokungenzi nzuzo, izikolo, izibhedlele kunye namashishini amancinci, ahlala enikezela ngeemveliso zentengiso ezinelogo ukubhengeza inkampani okanye umsitho wabo kunye nokubulela abasebenzi kunye nabathengi.
I-ASI yatyhila uMcebisi we-2021 Power 50 ngexesha leNgqungquthela ye-ASI Power. Umnyhadala ophambili weshishini lentengiso ubonise inqaku eliphambili nguRichard Montañez, othe wasuka kwi-janitor eFrito-Lay waya kusekela mongameli wePepsiCo.
Yaziswa ngo-2006, i-Counselor Power 50 minyaka le igqamisa abasasazi kunye nabaphathi ababonelela ngempembelelo enkulu kwintengiso yentengiso.